कोलकाताका अचुक अस्त्र सुनिल | सबै खेल
कोलकाताका अचुक अस्त्र सुनिल
२५ आश्विन २०७७, आईतवार १२:४०
कहाँ छन् सुनिल नारायण ? इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा कोलकाता नाइट राइडर्सले बुधबार चेन्नई सुपर किंग्सको सामना गर्दा यही प्रश्न सोधिएको थियो, त्यो पनि दुवै इनिङ्समा ।
कोलकाताले ब्याटिङ गर्दा उनले इनिङ्स सुरुआत गरेनन् । अनि बलिङका बेला पनि ११ ओभरपछि मात्रै मौका पाए, जति बेला चेन्नई एक विकेट गुमाएर ९४ रनको स्थिति थियो । त्यसो त यसपल्टको आईपीएलमा इनिङ्सको सुरुआत गर्दा उनी सफल रहेका छैनन् ।
प्रत्येकपल्ट उनी शर्ट बलमा कमजोर देखिएका छन् । खासमा उनको प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको स्वरूप नै गल्ली क्रिकेटको जस्तो छ । सक्दा प्रहार गर्ने, नसके आउट हुने । लगातार खेलमा असफल भएपछि सुनिललाई ब्याटिङको तल्लो क्रममा झारियो नै । चेन्नईमा खासै शर्ट बल गर्ने राम्रा बलर नभएको स्थितिमा पनि तल्लो क्रममा ब्याटिङ गराउनु के उनलाई घटुवा गरिएकै हो त ?
तर त्यस्तो भएको रहेनछ । सुनिल माथिल्लो क्रममा असफल हुनुको अर्थ उनी टिमका लागि बोझ बनेका छैनन् । उनी त सम्पत्ति नै हुन् । कोलकाताका बलिङ प्रशिक्षक केली मिल्स भन्छन्, ‘केही खेलमा उनको ब्याट चम्केको छैन, यस्तोमा केही सामान्य परिवर्तन गर्दा खेलाडीलाई कुनै बेला फाइदा गर्छ, हामीले त्यही चाहेका हौं ।’ कप्तान दिनेश कार्तिक र कोलकाताले त सुनिललाई त्यस खेलमा चतुर्‍याँइपूर्वक प्रयोग गरेकै हुन् ।
चेन्नईविरुद्ध सुनिललाई ‘पिन्च हिटर’ को भूमिका दिइएको थियो । फेरि माथिल्लो क्रममा उनले गर्दै आएको काम त त्यही थियो । खाली उनी चौथो क्रममा आए । जतिबेला उनी आए, त्यो ब्याटिङक्रमको खासै महत्त्व थिएन । कोलकाताले नवौं ओभरमा नितिश राणालाई गुमाएको थियो, करन शर्माको बलिङमा । त्यो लेगब्रेक थियो । लेग स्पिनर बायाँहाते ब्याट्सम्यानका लागि उतार्नु ठीक थियो ।
यस्तोमा इयोन मोर्गनलाई किन पठाइएन त ? उनी त आफैं उत्कृष्ट लयमा छन् र उनलाई ट्वान्टी–२० क्रिकेटको पूर्णकालीन ब्याट्सम्यान भन्न सकिन्छ । यसका दुई कारण हुन सक्छन् । त्यो बेला मोर्गनको विकेट सुनिलको भन्दा बढी महत्त्वको थियो । फेरि त्यो स्थितिमा कोलकातालाई छोटो आक्रामक ब्याटिङ पनि आवश्यक थियो । त्यो त्यही स्थिति हो, जतिबेला ब्याट्सम्यानमाथि प्रायः बलर हाबी हुने गर्छ । कोलकाताको यो रणनीतिले खुबै काम गर्‍यो ।
आफ्नो स्वभावअनुसार सुनिलले ९ बलमा १७ रन बनाए । जम्मा २.५ ओभरमा २८ रनको साझेदारी भयो, तेस्रो विकेटका लागि । यो स्थितिमा चेन्नईका कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले रवीन्द्र जडेजालाई बलिङमै उतारेनन् । सुनिल चाँडै आउट पनि भए । यसक्रममा इनिङ्सको अन्त्यतिर मोर्गन र आन्द्रे रसेलले खुलेर खेल्न पाए । यो सुनिललाई रणनीति ठीक प्रयोगकै कारण सम्भव भएको थियो ।
बलिङलाई लिएर चर्चा गर्ने हो भने उनी चेन्नईविरुद्ध सफल रहँदै आएका छन् । तर उनलाई सुरुमा प्रयोग गरिएन । प्रशिक्षक मिल्स भन्छन्, ‘सुनिल पक्कै पनि सुरुदेखि बलिङमा आएनन् । तर इनिङ्सको अन्त्यतिर उनले बलबाट पनि सटिक काम गरे । खेलको अन्तिम ९ ओभरमा हामीसँग उनी जत्तिका अनुभवी बलरको चार ओभर बाँकी थियो ।’ कोलकाताले प्याट कमिन्सलाई अन्त्यतिर बलिङ गराउन चाहेन । किनभने त्यसमा उनी केही महँगो साबित भए ।
टिमले अन्त्यतिर सुनिल वा रसेलमध्ये एकलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यो, निर्णय सुनिलको पक्षमा रह्यो । चेन्नई खेलाडीले उनीविरुद्ध खुलेर खेल्नै सकेनन् । धोनी पनि त्यतिबेला कमजोर देखिएनन् । एक खेलाडीलाई कसरी प्रयोग गर्नु पर्छ, सुनिलको भूमिकाले ठ्याक्कै देखाउँछ ।
सुनिलले शनिबार पन्जाबविरुद्धको खेलमा पनि अन्तिम ओभर बलिङ गर्दै जित दिलाएका थिए । उनले अन्तिम ओभरमा मन्दीप सिंहको विकेट लिए । उनले पन्जाबसँगको खेलमा २८ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए ।
(साभारः कान्तिपुर दैनिक)
Tags: ipl 2020, kolkata knight riders, Sunil Narine
स्वीटेकले जितिन् फ्रेन्च ओपन